VIDEO-Mid Kamid ah Xisaabiyayaashii Qaranka Somaliland oo Lacag Dhan 32000,000 La Goostay Kuna Biiray Jabhadda Caarre.
Puntlandnews.net (Hargaysa)-Xisaabiyihii guud ee Somaliland u qaabilsanaa gobolka Togdheer Mustafe Macalin ayaa si rasmi ah ua jihaystay magaalada Burco isagoona ku biiray Jabhadda xoraynta Somaliland ee Corneal Caarre hogaamiyo.
Sarkaalkaan sare ee katirsanaa xukuumadda Somaliland gaar ahaan maamulka gobolka Togdheer ayaa waxaa la sheegay inuu la dhaqaaqay lana goostay adduun lacageed oo gaaraya 32000,000 Milyan oo Shilinka Somaliland ah sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha gobolka Togdheer,
Lacagta uu la goostay masuulka u goostay Jabhadda Caarre ayaa waxaa la sheegay in la waysanaa muddo shan maalmood ah haseyeeshee ugu dambayn la soo ogaaday inuu gaarey magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar Puntland.
Badha-saabka gobolka Togdheer ee Somaliland Xamse Maxamed Cabdi ayaa warfidiyeenka u sheegay in arrintaani aysan filanayn haseyeeshee uusan ahayn masuulkii ugu horeeyey ee ka baxsada Somaliland kuna biira Jabhadda Caarre.
Warar hoose ayaa sheegaya inuu muddo taagnaa khilaaf u dhexeeya badha-saabka gobolka Togdheer iyo xisaabiyaha taasi oo ugu dambayntii sabab u noqotay in xisaabiye Mustaf Macalin uu ku biiro Jabhadda uu hogaamiyo Corneal Caarre ee dagaalka kula jirta maamulka Somaliland.
Maalmo kahor ayey ahayd markii Jabhadda Caarre duleedka magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar ay ku soo bandhigtay mulkiilihii mid kamid ah shirkadaha gacanta ku haya hantida qaranka Somaliland gaar ahaan samaynta agabka dowladda.